Horjoogeyaasha al-Shabaab oo weli ka soo goosanaya ururka
Labo ka mid ahaa horjoogeyaasha sare-sare ee al-Shabaab ayaa isku soo dhiibeen Ciidammada xoogga Dalkeenna Soomaaliyeed ee ku sugan gobalka Gedo.
Wisaarradda warfaafinta ee Dowlladda Federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay in Musdhaf Ibraahim Isaaq iyo Maxamed Xasan Madhaley ay isu soo dhiibeen saraakiisha Ciidammada Dowladda ee ku sugan magaalada baardheere iyagoo wataan hubkooda.
Inta aysan isa soo dhiibiin, labadaa horjoogeyaal waxay u xil-saarnaayeen sir-doonka kooxdaas iyo xabsiyada ay sida xaq-darrada ah dadka ugu taxaabaan, waxaana isa soo dhiibkoodaan loo aaneynayaa iyadoo awoodda kooxda al-Shabaab si aad ah loo wiiqay maaddaama lagu wado duqeyn joogta ah.
Dowladda Soomaaliyeed waxay sheegtay in isa soo dhiibka labada horjoogeyaal ay jab weyn ku tahay ururka dilaaga ah ee al-Shabaab iyo in arrintaan ay xaqiijineyso jabka guud ee milatari ee kooxda soo wajahay. Sidoo kale, dowladda ayaa ugu baaqday in xubnaha kale ee al-Shabaab ay ka faa’iideystaan cafiska guud ee ay dowladda fidisay ayna ka soo goostaan ururkaas dalkeenna u diiddan nabadda.
Sida ay dowladdu sheegtay, labadaa nin waxay horay xiriir ula sameeyeen saraakiisha dowladda kuwaasoo ka dhaadhiciyay inay ka soo goostaan ururkaas.